तीन श्रीमतीका श्रीमानको अनाैठो नियम ! – Jagaran Nepal
तीन श्रीमतीका श्रीमानको अनाैठो नियम !
संसारमा निकै रोचक र आश्चर्यजनक घट्नाहरु घट्ने गर्दछन् । यस्तै रुसको भ्लादिमिर सहरमा एक रोचक घटना लामो समयदेखि चर्चामा छ । इभान सुखोव नाम गरेका एक पुरुष जसको ३ वटा श्रीमती छन् तर जहाँको कानुनअनुसार एक बाहेक धेरै विवाह गर्न पाईदैन तर यदि आपसी समझदारी भयो भने राख्न पाइन्छ ।
इभानको सपना एकदम अचम्म खालको थियो उनी चाहन्थे कि उनको धेरै पार्टनरहरु होस् र उनको ५० छोराछोरीको जन्म होस् । जसको लागि उनले ३ वटा श्रीमती विवाह गरे ।
इभानकाे पनि आफ्नै छुट्टै बेडरुम छ र हरेक दिन उनी निर्णय गर्छन् कि आज कुन पत्नीले आफुसंग रात बिताउने
तर आश्चर्यजनक लाग्ने कुरा के छ भने इभानलाई यदि कुनै श्रीमती संग रिस उठ्यो भने ती श्रीमतीसँग एक महिनासम्म शारीरिक-सम्बन्ध राख्दैन र ती श्रीमतीलाई आफ्नो बेडबाट पनि टाढा राख्छन् ।
इभानकाे पहिलो श्रीमतीले पहिले यस्तो कुराको विरोध गरेकी थिइन तर पछि इभानलाई यसो गर्न अनुमति दिईन । इभानको ३ श्रीमती छुट्टा – छुट्टै फ्ल्याटमा बस्छन् । र इभानकाे पनि आफ्नै छुट्टै बेडरुम छ र हरेक दिन उनी निर्णय गर्छन् कि आज कुन पत्नीले आफुसंग रात बिताउनेछिन्।